82- Geeridii Rasuulka scw
Ka dib wuxuu Rasuulku SCW sadaqeeyey 7 Diinaar oo uu haystay, hubkiisiina wuxuu u hibeeyey muslimiinta, canbuur bireedkiisiina nin yahuud ah ayaa rahan ugu haystay 30 saac oo qamadi ah. Maalintii isniinta (maalintii uu geeriyoodey) ayuu Rasuulku SCW gurigii uu joogey ee Caa'isha daaha ka feyday oo fiiriyey safafkii muslimiinta, markaas ayuu u bogay oo ku qoslay, Abuubakar ayaa markaas u maleeyey in Rasuulku SCW salaadda imaanayo hase yeeshee wuxuu Rasuulku SCW u ishaaray in uu iska joogo, wuuna iska laabtay. Markii barqadii la gaaray ayuu Rasuulku SCW gabadhiisii Faadumo u yeeray, wuxuuna ku sireystay arrin markaas ayey oyday, markaas ayuu arrin kale ku sireystay markaas ayey qososhay. Waa dambe markii Faadumo la weydiiyey arrinkaas waxa ay tiri "wuxuu markii hore ii sheegay in uu xanuunka haya u dhimanayo, markaas ayaan ooyey, markii kalena wuxuu ii sheegay in aan ahay qofka ugu horreeyey oo ehelkiisa ah oo raaci doona, markaas ayaan qoslay". Sidoo kale maalinkaas waxa ay Faadumo aragtay Rasuulka SCW oo xanuun aad u darani hayo, markaas ayey tiri "aabbe waa dhibaateysan yahay", markaas ayuu Rasuulku SCW ku yiri "maanta wixii ka dambeeya aabbahaa ma dhibaatoon doono". Ka dib Rasuulku SCW isaga oo Caa'isha ku tiirsan ayaa waxaa u soo galay Cabdiraxmaan binu Abuubakar oo caday wata, markaas ayey Caa'isha aragtay Rasuulka SCW oo cadayga fiirinaya, waxa ayna fahamtay in uu jecel yahay, markaas ayey tiri "ma kaaga qaadaa", isna madaxa ayuu ugu ishaaray haa, markaas ayey uga qaadday oo u calaalisay, markii uu cadaygii dhammaystayna, gacantiisa ama fartiisa ayuu kor u taagay isaga oo indhaha saanqaafka ku fiirinaya, bishimahana dhaqdhaqaajinaya oo leh "Fi Raafiiqil-Aclaa", saddex goor ayuuna sidaas yiri, markaas ayey Caa'isha garatay in uusan adduunka dooran.